2021 Ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia andrasana ho ambany $ 200 miliara noho ny amin'ny 2019
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » 2021 Ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia andrasana ho ambany $ 200 miliara noho ny amin'ny 2019
Ny onja faharoa an'ny areti-mifindra COVID-19 dia nitondra lozam-pifamoivoizana sy orinasam-pizahan-tany ary nihena ny fanarenana ny tsena iray manontolo
Ny areti-mandringana COVID-19 dia niantraika tamin'ny sehatra rehetra manerantany, fa ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia anisan'ny tena voa mafy. Na dia nampihatra ny fepetra fiarovana sy fidiovana aza ny trano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pialantsasatra ary nosokafana tamim-pitandremana tamin'ny tapany faharoa tamin'ny 2020, ny onja faharoa amin'ny areti-mifindra dia nitondra lozam-pifamoivoizana vaovao ho an'ireo orinasa miasa ao amin'ity sehatra ity ary nampiadana ny famerenana ny tsena iray manontolo.
Raha ny angom-baovao farany, ny vola mitambatra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany dia antenaina hahatratra $ 540 miliara amin'ny 2021, sahabo ho $ 200 miliara raha mitaha amin'ny tarehimarika 2019.
Paositra-Covid-19 Haharitra telo taona ny fahasitranana
Tamin'ny taona 2017, ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany iray manontolo dia nahazoana vola mitentina 688.5 miliara dolara, hoy ny fanadihadiana. Nandritra ny roa taona manaraka dia nitsambikina 7% io isa io ary nahatratra $ 738.8 miliara.
Saingy, ny taona 2020 dia niteraka ny fihenan'ny tsena lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Ireo firenena manerana an'izao tontolo izao dia nametraka lalàna momba ny fanidiana mba hifehezana ny fihanaky ny viriosy, izay mitarika fialan-tsasatra an'arivony an'arivony ary hotely mihidy eo anelanelan'ny volana martsa sy mey. Na dia maro tamin'izy ireo aza no nametra ny fameperana fivezivezena tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2020, tsy ampy ny nanarona ny fatiantoka marobe vokarina tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny taona.
Ny statistika dia mampiseho fa ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany dia nilatsaka 52% ka hatramin'ny $ 348.8 miliara tao anatin'ny krizy COVID-19. Ny angon-drakitra koa dia manondro fa afaka taona maro vao tafarina amin'ny sehatry ny areti-mifindra coronavirus ny sehatra iray manontolo. Ao amin'ny 2021, ny vola miditra dia vinavinaina hitombo 54% isan-taona hatramin'ny $ 540 miliara, 26% latsaka noho ny tamin'ny 2019.
Ny taona 2022 dia vinavinaina hahitana fidiram-bola $ 666.1 miliara, mbola $ 72.7 miliara ambanin'ny ambaratonga mialoha ny COVID-19. Amin'ny faran'ny taona 2023, ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia antenaina hampiakatra $ 768.4 miliara.
Amin'ny maha sehatra lehibe indrindra an'ny tsena azy, ny indostrian'ny hotely dia vinavinaina hahazo $ 284.7 miliara amin'ny fidiram-bola amin'ity taona ity, 22% ambany noho ny amin'ny taona 2019. Ny ampahan'ny fialantsasatry ny fonosana dia napetraka hahatratra $ 171.4 miliara dolara amin'ny 2021, fisondrotana 87 miliara dolara raha ampitahaina amin'ny- Isa COVID-19. Ny fanofana fialan-tsasatra sy ny indostrian'ny fitsangantsanganana dia manaraka ny vola miditra amin'ny 66.9 miliara dolara sy 16.8 miliara dolara.
Ny isan'ny mpampiasa hitombo 46% YoY ka hatramin'ny 1.8 Miliara, mbola 26% ambanin'ny haavo alohan'ny COVID-19
Ny fanadihadiana dia nanambara ihany koa ny isan'ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany antsasaky ny antsasaky ny areti-mifindra coronavirus, nihena hatramin'ny 2.4 miliara tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 1.2 miliara tamin'ny taona 2020. Na dia antenaina hitombo 1.8 miliara aza io isa io amin'ny 2021, dia mbola maneho 26 % nilatsaka raha oharina amin'ny ambaratonga talohan'ny COVID-19.
Ny statistika dia mampiseho ny isan'ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fitsangantsanganana an-tsambo dia tombanana hahatratra 17 tapitrisa amin'ity taona ity, fidinana 41% ao anatin'ny roa taona, ary ny fihenan-danja lehibe indrindra eo amin'ny sehatra tsena rehetra. Ny ampahan'ny fialantsasatry ny fonosana dia natao hahatratra mpampiasa 335 tapitrisa amin'ny 2021, 37% ambany noho ny tamin'ny taona 2019. Ny indostrian'ny hotely dia manaraka ny fihenan'ny 24% ao anatin'ny roa taona ary mpampiasa 845.7 tapitrisa hatramin'ny taona ity.
Nofakafakain'ny jeografia, Etazonia dia maneho ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany lehibe indrindra manerantany, andrasana hahatratra $ 104.5 miliara dolara amin'ity taona ity, 40 miliara dolara latsaky ny tamin'ny 2019.
Ny vola miditra amin'ny tsena sinoa, satria izy no faharoa lehibe indrindra manerantany, dia vinavinaina hitsambikina 67.5% isan-taona hatramin'ny $ 89.3 miliara amin'ny 2021, mbola 30 miliara dolara ambanin'ny ambaratonga mialoha ny COVID-19. Alemanina, Japon, ary Angletera dia manaraka 45.8 miliara dolara, 29.3 miliara dolara, ary 26.7 miliara dolara azo amin'ny vola miditra.